မီးဖိုချောင်ထဲက ပုန်းကွယ်နေတဲ့ စူပါအစားစာများ – Trend.com.mm
မီးဖိုချောင်ထဲက ပုန်းကွယ်နေတဲ့ စူပါအစားစာများ
Posted on January 31, 2019 by Wint
မီးဖိုချောင်ထဲက ပုန်းကွယ်နေတဲ့ စူပါအစားစာများဆိုတော့ ဘာပါလိမ့်..။ ပုန်းကွယ်နေတယ်ဆိုတာထက်သင်မြင်အောင်မကြည့်လို့ မသိတာပါ။ ဒီလိုစူပါအစားစာတွေရဲ့အာနိသင်ဟာ မင်းကိုဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲပေးနိုင်လဲဆိုတာ သိရင်ယုံမှာတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ အိုခေ… ဒါဆို မီးဖိုချောင်ထဲ စူပါအစားစာတွေက ဘာများဖြစ်မလဲ ?
လိမ္မော်သီးမှာ flavonoids ဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် သွေးခဲပိတ်ခြင်း ပြဿနာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က ဗီတာမင်စီလည်း အပြည့်ဝပါဝင်တဲ့အတွက် အရေပြားထိခိုက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ အရေးကြောင်းတွေ ပျောက်ကင်းစေပြီး နူးညံ့ချောမွေ့စေပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ကြောင့် အစာခြေစနစ်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ကဲ.. ငှက်ပျောသီးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ pectin က
သွေးသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကို အားကောင်းစေပါတယ်။ ပိုတက်စီယမ်လည်းအပြည့်ဝပါဝင်ပါသေးတယ်။ ဗိုက်ပြည့်စေတဲ့အတွက်ဝိတ်ချချင်တဲ့ မမတွေအတွက် စားပေးသင့်တဲ့ အသီးဖြစ်တယ်နော်။
ဒိန်ချဉ်ကို နေ့တိုင်းမစားနိုင်ရင်တောင် တစ်ပတ် သုံးရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် စားပေးခြင်းက အရိုးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းစေပါတယ်။ ပရိုတိန်းဓာတ်က ကြွက်သားတွေကိုသန်မာစေပြီး ဦးနှောက်စွမ်းရည်ကို ဖွံဖြိုးစေပါတယ်။ ဗီတာမင် D နဲ့ ကယ်စီယမ်ဓာတ်တို့က အရိုးကျန်းမာရေးကို အဓိက ပံ့ပိုးပေးတာပါ။
ဂေါ်ဖီထုပ်မှာ အမျှင်ဓာတ်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီး ကိုလက်စထရောတွေလျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် K က တစ်ခွက်စာလောက်ပါဝင်တဲ့အတွက် သွေးခဲတာတွေလည်း ကောင်းကောင်းတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အစာခြေစနစ်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေတာကြောင့်အစာမကြေမှာ မပူရတော့ဘူးနော်။
သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဘာလို့ ကိုယ်တို့ဘ၀ရဲ့အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်နေရတာလဲ?
The Batman ဇာတ်ကားသစ်မှာ Ben Affleck ပါဝင်လာတော့မှာမဟုတ်